သုညမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး-နယူးကမ်းလှမ်း 2010 Zero DS and Zero S for Under $7500… | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (36332)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (11227)
Bajaj Avenger 220: တစ်ဦးကဘက်စုံပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ကယ် Blo ... (9935)
MZ စမှတ်စုများ - Philadelphia တွင်မွငျးစီးစဝီကီ (9654)
ကြတယ်လို့ EFI အစီရင်ခံစာမှာ relay ကိုအမျိုးအစားများအပေါ်မှတ်စုများ (သတိပေးခြင်း: မှိုင်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာ ... (9029)
VP ပြိုင်ပွဲလောင်စာနောက်ဆုံးရသတင်းများ: VP UNLEADE မိတ်ဆက် ... (8679)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (8302)
Peugeot မြန်နှုန်း Fight2အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလက်စွဲစာအုပ်ပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန် ... (7367)
ဟွန်ဒါ Wave ကို 125 လက်စွဲပိုင်ရှင်များလမ်းညွှန်စာအုပ်များပြန်လည်ပြုပြင် (7315)
Kawasaki ZXR 750 - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, သတင်း & Advi ... (7305)
bajaj Pulsar 150 ပုံစံ, Review, နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ထားတဲ့ ... (6358)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5916)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5907)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5552)
Home → စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော → Zero Motorcycles Offers All-New 2010 Zero DS and Zero S for Under $7500...
19 Jun 2015 | Author: dima | Comments Off on သုညမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး-နယူးကမ်းလှမ်း 2010 အောက်မှာ $ 7500 ဘို့သုည DS နှင့်သုည S က…
သုညမော်တော်ဆိုင်ကယ်အားလုံး-နယူးကမ်းလှမ်း 2010 Zero DS and Zero S for Under $7500 After California Rebate – VIDEO ENHANCED
SANTA CRUZ, CA – မတ်လ 17, 2010: Zero Motorcycles,amanufacturer of electric motorcycles, announced today its plans for an upcoming Discover the Experience Tour across California as its newest state incentive program gets underway.
Zero Motorcycles first entered the motorcycle industry in 2006 with the all-electric Drift. တွင် 2008 they launched the Zero X which exceeded all expectations by selling out before the year end. Its success blazed the path for the long awaited launch of the Zero S Supermoto motorcycle last year.
အဆိုပါလျှပ်စစ်သုည DS PlugBike.com အတူသုည Redefines Dual-အားကစား
2011 Zero MX: ပထမဦးဆုံးအစီးနင် – ဖုန် Rider မဂ္ဂဇင်း
တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic Brammo Enertia Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Aprilia Mana 850 Ducati 60 မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဆူဇူကီး AN 650 စမတ် eScooter Ducati Diavel ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 စက်ဘီး Kawasaki ER-6n စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Ducati Desmosedici GP11 ဟွန်ဒါ DN-01 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Bajaj Discover ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို